मंगल ग्रहबारे नयाँ तथ्य पत्ता लाग्ने ! कम्पनबारे अध्ययन गर्न नासाले पठायाे ‘इनसाईट’
Sat, May 30, 2020 at 2:06pm
‘इनसाईट’ले मंगलग्रहको सतहमा रहेको माटोमा सिधै ‘साईज्मोमिटर’हरू जडान गर्ने,एक वर्षमा कति धेरै कम्पनहरू पत्ता लाग्नेछ भन्नेमा अनिश्चित
आईतवार, २३ बैशाख २०७५,	आहाखबर	1.23K
अमेरिकी संस्था नासाले मंगल ग्रहमा पछिल्लो यान प्रक्षेपण गरेको छ। ‘इनसाईट’ नामक सो यानले मुख्यतः मंगल ग्रहको भित्री भागको अध्ययन गरी त्यहाँ भइरहने कम्पनबारे जानकारी पृथ्वीमा पठाउनेछ ।
स्थिर रहने ‘इनसाईट’ले मंगलग्रहको सतहमा “मार्सक्वेक” अर्थात् मंगल ग्रहमा हुने भू–कम्पनहरूको अध्ययन गर्न कम्पन मापन गर्ने उपकरण ‘साईज्मोमिटर’हरूका साथै यूकेबाट लगिएका सेन्सरहरू जडान गर्नेछ।
ती कम्पनहरूले जमिनमुनि रहेको चट्टान कसरी पत्र-पत्रमा बनेको छ भन्ने खुलासा गर्नुपर्नेछ र त्यो तथ्याङ्क साढे ४ अर्ब वर्षअघि ग्रहहरू कसरी बने भन्ने विषयमा थप उजागर गर्नेछ।
‘इनसाईट’का प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. ब्रुस ब्यानर्टले भने, “कम्पनयुक्त तरङ्गहरू मंगल ग्रह हुँदै अघि बढ्दा तिनले सूचना लिनेछन्। र साईज्मोग्राममा देखिने ती सबै तरंगहरूबाट विवरण कसरी निकाल्ने भनेर वैज्ञानिकहरूले बुझ्नेछन्। सबै दिशाहरूबाट “मार्सक्वेकहरू” लिएपछि हामीले मंगलग्रहभित्रको थ्री-डी दृश्य सँगै राख्न सक्नेछौँ।”
क्यालिफोर्नियास्थित भ्यानडनबर्ग हवाई फौज अखडाबाट स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान ४ बजेर ५ मिनेटमा एटलास रकेट प्रक्षेपण भएको हो। सन् १९७० को दशकताका पछिल्लोपटक नासाले भाइकिङ ल्यान्डर्समार्फत् मंगल ग्रहमा कम्पन मापन गर्ने उपकरण-साईज्मोमिटरहरू पठाएको थियो। तर ती प्रयास सतहका कम्पनहरू पत्ता लगाउन असफल रहे किनकि अनुसन्धान गर्ने यानहरूको बीचमा उपकरणहरू जडान गरिएका थिए।
ती उपकरणहरूले हावा चल्दा भएको यानहरूको हल्लाइ मात्रै रेकर्ड गरेका थिए।
त्योभन्दा भिन्न ‘इनसाईट’ले मंगलग्रहको सतहमा रहेको माटोमा सिधै ‘साईज्मोमिटर’हरू जडान गर्नेछ। एक वर्षमा कति धेरै कम्पनहरू पत्ता लाग्नेछ भनेर अनिश्चित नै छ तर आकलन गरिएअनुसार केही दर्जन हुनसक्ने संकेतहरू छन्।
पृथ्वीमा त्यतिको कम्पन हुँदा मानिसहरूले महसुस नै गर्दैनन्।